OneOdio A10 နှင့် OneOdio Fusion A70 နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Androidsis
Androidsis မှာဆက်လုပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ်ဖန်၏လက်ဖြင့် အမုန်းတစ်ခု, ငါတို့သည်သင်တို့စုံတွဲတစ်တွဲ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆောင်ခဲ့ရမည် ကြိုးမဲ့ headband နားကြပ် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် က A10 နှင့် Fusion A70။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်းအသံသို့မဟုတ်တေးဂီတနှင့်ပတ်သက်သော gadget များသည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အများဆုံးတောင်းဆိုမှုအများဆုံးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်နားကြပ်ကိုသာမန်နားကြပ်များထက်ကျော်လွန်လိုလျှင်၊ ယနေ့သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အခြားနည်းလမ်းများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဘယ်တော့လဲ သင်ကပိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံရှာနေပါတယ် အိတ်ဆောင်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး နားကြပ် သူတို့အဖြေဖြစ်တယ်။ OneOdio သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောနားကြပ်များ ဆက်၍ ထုတ်လုပ်နေပြီးနောက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
1 အဆိုပါ OneOdio A10
1.1 OneOdio A10 ကိုဖြုတ်ခြင်း
2 OneOdio A10 ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတွင်နည်းပညာ
3 အဆိုပါ OneOdio A70
4 Fusion A70 ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်
4.1 OneOdio A70 ကိုဖြုတ်ခြင်း
အဆိုပါ OneOdio A10
ဒီနားကြပ်ပါရှိပါတယ် စိတ်ကူးကြည့်။ သူတို့ကိုသင်သေတ္တာထဲမှထုတ်ယူပြီးထိုအရာကိုနားလည်ရန်သင့်လက်၌ကိုင်ထားရမည် သူတို့ဟာသာမန်နားကြပ်မဟုတ်ပါ။ ငါတို့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုမင်းချက်ချင်းတွေ့နိုင်တယ် အရည်အသွေးဆက်စပ်ပစ္စည်း။ အဆိုပါ ပစ္စည်းများ ဆောက်လုပ်ရေးကိုသင်ကနေမျှော်လင့်ထားသည့်ခံစားရှိသည် level ထုတ်ကုန်နှင့်အလေးချိန်သည်အသိစိတ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကိုဆိုလိုသည်။ ထိုအရာပါပဲ မင်းပိုင်ဆိုင်လို့ရတယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်နှင့်အတူ ကုဒ်ကိုအသုံးပြု။ အထူး 40% လျှော့စျေး androidsis40 ။
ထုတ်ကုန်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၊ အဆိုပါ pads ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု နားကြပ်များတည်ရှိရာဘယ်မှာရှိသည် ဘဲဥပုံပုံဖော် အပြင်ဘက်နှင့်အတူ Chrome ဆေးသုတ်သည်။ များစွာသောလူများအတွက်၎င်းသည်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပြီး pinna သည်အမြဲတမ်းအတွင်း၌ရှိနေစေရန်အနည်းငယ် rounded ပုံသဏ္preferာန်ကိုပိုနှစ်သက်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံနား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်အပြင်ဘက်ရှိသော်လည်းအခြားသူများအတွက် rounder shape သည်ပိုမိုသင့်လျော်သည်။
အ ကွမ်းယာဆိုင် built in နေကြသည် မြင့်မားသောနှစ်သိမ့်မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်။ ထို့ကြောင့်အာမခံ ပြီးပြည့်စုံသောညှိနှိုင်းမှု ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပျက်ပြယ်အကျိုးသက်ရောက်မှု သူတို့ကောင်းစွာသူတို့ကိုအားမရသဖြင့်ဖန်တီးသောစေသည် အဆိုပါတက်ကြွဆူညံသံလျှော့ချရေးအတွေ့အကြုံပို။ ပင်ထိရောက်သောဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် girar အဆိုပါ pads ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု 90 ဒီဂရီအထိ ဆုတောင်းခြင်းအဘို့နှင့်အာကာသလျော့နည်းယူပြီးပိုမိုအဆင်ပြေသူတို့ကိုပို့ဆောင်။
OneOdio A10 ကိုဖြုတ်ခြင်း
နားကြပ်ကိုယ်နှိုက်အပြင်၊ ကွဲပြားခြားနားသောကြိုးတွေ။ အ cable ကိုအားသွင်းနေစဉ် format နဲ့ဂန္ USB အမျိုးအစား C သမားရိုးကျ USB နှင့်တစ်ဖက်စွန်းရှိအခြားကြိုးတစ်ချောင်းသို့ \_ t အခြား USB C နဲ့ဘာအလုပ်လုပ်လဲ Analog စလမ်းအတွက်မည်သည့် device ကိုချိတ်ဆက်ရန် သူတို့ကိုသုံးပါ ဘလူးတုသ်ဆက်သွယ်မှုအတွက်မလိုအပ်ပါ ဘက်ထရီမစားဘဲ။
အဲဒီမှာရှိပါတယ် သေးငယ်တဲ့ adapter ဘယ်ဟာလဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် 3,5 jack connector မှတဆင့် analog analog နှစ်ခုအထိဆက်သွယ်နိုင်သည် တူညီတဲ့နားကြပ်ရန်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့တကယ်ကြိုက်တယ် Semi- တင်းကျပ်တင်ဆောင်လာသောအမှု သူတို့ရိုက်နှက်မှုကနေကာကွယ်ထားနိုင်အောင်ကျနော်တို့ကိုလည်းသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့်အတွက်။
?? သင်လိုအပ်သမျှသာလိုပါက သင်၏ဥစ္စာကိုယူပါ ဦး ဟုဆို၏ OneOdio စာမျက်နှာပေါ်တွင်နှင့်လျှော့စျေးကုဒ်သုံးစွဲဖို့သတိရပါ androidsis40 ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်၏နောက်လိုက်ဖြစ်ရန် ၄၀% စုဆောင်းရန်။
OneOdio A10 ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတွင်နည်းပညာ
OneOdio A10 တွင်တစ်ခုရှိသည် 750 mAh ဘက်ထရီ ကြောင်းတစ်ခုကြာချိန်ကတိပေး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ၁၅ နာရီအထိ။ ကျနော်တို့ဘက်ထရီအားသွင်းစရာမလိုဘဲဂီတကိုရက်ပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တက်ကြွသောဆူညံသံဖျက်သိမ်းမှုကိုအသုံးပြုပါက ၂၅ နာရီဖြစ်လျှင်ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာထက်ဝက်ခန့်လျော့နည်းသွားသည်။ ၅ မိနစ်အားသွင်းရုံဖြင့် ၂ နာရီအထိပြန်လည်ဖွင့်နိုင်သည်.
အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်တစ်ချက် ကြိုးမဲ့နားကြပ်တစ်ခုလုံးမှာတစ်ခုတည်းကတစ်ခုမဟုတ်ပါ မော ပြည့်သော ဘက်ထရီကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ နားကြပ်ကိုကေဘယ်ကြိုးဖြင့် သုံး၍ ဆက်လုပ်ပါ ငါတို့ box ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့သော။ ဒါ့အပြင် တက်ကြွဆူညံသံဖျက်သိမ်းမှုလည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် ပင် cable ကိုအတူအပြည့်အဝစွမ်းရည်မှာ connected။ OneOdio A10 သည်aအနိမ့်ကြိမ်နှုန်းဆူညံသံကို ၈၅% အထိဖျက်သိမ်း.
La ဘလူးတုသ် 5.0 ဆက်သွယ်မှု ပြန်ဖွင့်စဉ်အတွင်းအစာရှောင်ခြင်းထပ်တူပြုခြင်းနှင့်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံပါသည်။ ကျနော်တို့ကအပေါ်မှီခိုနိုင်ပါတယ် 10 မီတာအထိအကွာအဝေး ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့စက်မှ။ ငါတို့တွေ့တယ် built-in CVC 8.0 မိုက်ခရိုဖုန်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေမှာရှင်းလင်းပြီးကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အသံကိုပေးတယ်။
အဆိုပါ OneOdio A70
ယခုကြည့်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည် ဒီစုံတွဲ၏အခြားအဖွဲ့ဝင် ကြိုးမဲ့ဘလူးတုသ် headband နားကြပ်၏။ The OneOdio A70 သူတို့ A10 နဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခံအကျဆုံး features အများစုကိုမျှဝေသည်။ ဖြန့်ကျက်နိုင်သော headband၊ နားကပ်အိတ်များနှင့်aအလွန်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ချောနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့် အရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံရိပ်ကိုကမ်းလှမ်းရန်။
El Ergonomics ဒီဇိုင်း နားကြပ်များနှင့်တိုးချဲ့ထားသော headband များသည်အခြားသောမော်ဒယ်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဒီကိစ္စမှာ, နားကြပ်သည်ပုံသဏ္moreာန်ပို ၀ င်သည်။ la ရပ်စဲ ပြင်ပဖြစ်သော ဗီနိုင်းမှတ်တမ်းများ၏ဘောဇဉ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်း ဒါဟာ rounded ပုံသဏ္andာန်နှင့်အနက်ရောင်အတွက်အပြင်ဘက် finish ကို၏ကျန်နှင့်အတူအများကြီးပိုကောင်းသည်။ A70 ဟာမင်းရဲ့စတိုင်လ်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ သင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဝယ်နိုင်သည် အထူးလျှော့စျေးအထူးနှုန်းများနှင့်အတူ။
သူတို့သတိထားမိ သိသိသာသာထူ pads တစ်ချက်မှာ OneOdio A10 ထက်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပြောနိုင်တယ် တကယ်အဆင်ပြေ နားကြပ်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးနောက်။ သူတို့ကဘာမှမညှစ်ဘူး သူတို့perfectlyုံ fit ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရန်။ ၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကြောင့်အရီရီတီးမော်ဒယ်လ်သည်အခြားတစ်ခုထက်သာလွန်သော်လည်း၊ ၎င်းသည်အရသာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။
Fusion A70 ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်နားကြပ်များအကြောင်းကိုတိုင်းတာရန်နှင့်၎င်းတို့ပေးနိုင်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံအပြည့်အဝပေးရန်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ 40mm CAW အသံမောင်း ကမ်းလှမ်းသည် အသံတိုးမြှင့် သော accentuates ချွန်ထက် treble နှင့်အစွမ်းထက်ဘေ့စ။ နားကြပ်များတွင်အရည်အသွေးမြင့်သောအချက်ကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်သိသာသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည်။
La Shareport နည်းပညာ OneOdio Fusion A70 သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောနားကြပ်များကိုပြုလုပ်သည်။ မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၂.၅ မီလီမီတာနှင့် ၆.၃ မီလီမီတာအကွက်ပေါက်ပေါက်နှင့်အထွက်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်တူညီသောအဆုံးနှင့်အတူ၎င်း၏ cable ကို၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သံခမောက်များကို Bluetooth ဖြင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း ဂီတကိုအခြားနားကြပ်များနှင့်ကေဘယ်လ်မှတဆင့်မျှဝေနိုင်သည်အလွန်ရှားပါးတဲ့အရာ
OneOdio A70 ကိုဖြုတ်ခြင်း
ငါတို့ရှာတွေ့ OneOdio A70 ၏ box ထဲမှာကြည့်ရှု အချို့သောထင်ရှားသောဒြပ်စင်များ။ ဤကိစ္စတွင်, နားကြပ်တစ် ဦး ရှိသည် Heather၎င်းသည်သားရေထည်နှင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း၎င်းသည် ကတ္တီပါအတွင်းပိုင်းA1o ကဲ့သို့တင်းကျပ်သည့်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။
ငါတို့တွေ့တယ် ကေဘယ်လ်ကြိုး အတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူ လိမ်ပုံစံ ဘယ်တော့မှတိုတောင်းမှာမဟုတ်တဲ့အရှည်ကိုကမ်းလှမ်းဖို့ဆန့်ထားတယ်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ တ ဦး တည်းအဆုံးမှာနှစ်ဆ 3,5 မီလီမီတာ jack ကို output ကိုနှင့်အခြား 6,3 မီလီမီတာ။ နားကြပ်များထည့်သွင်းထားသောနှစ်ဆထည့်သွင်းမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားတစ်ချိန်စီ၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းသုံးနိုင်သည်။
အထက်ပါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းရှိသည် cable ကိုအားသွင်းခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းformat နဲ့ဤကိစ္စတွင် မိုက်ခရို USB။ ပြီးတော့ ကေဘယ်လ်ကြိုး ကြောင်းနှင့်အတူနှစ် ဦး စလုံးကြီးစွန်းမှာရှိပါတယ် 3,5mm jack ကို format ကို။ ဒီကေဘယ်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဘက်ထရီကမရပ်တော့ဘူး ကျနော်တို့က Analog စလမ်းအတွက်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုရန်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုခံစားရန်လိုအပ်သမျှ တရား ၀ င်စာမျက်နှာမှာသင့်ကိုလုပ်ပါ OneOdio ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ပုံစံ A10 A70
ဘလူးတုသ် 5.0 4.0
ဘက်ထရီ 750 mAh ဘက်ထရီ 950 mAh ဘက်ထရီ
ကြိုးမဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် 40 horas 50 horas
အချိန်အားသွင်းသည်2horas2horas
အကြိမ်ရေ 20Hz - 20 kHz 2402 MHz - 2480 MHz
ရှုထောင့် X ကိုက x 19 177စင်တီမီတာ 14 x ကို 10.5 x ကို 17
အလေးချိန် 249g 290g
Analog ဆက်သွယ်မှု NO 3.5 နှင့် 6.35 jack ကို
စြေး 70 99 € 34.99 €
ဝယ်ယူ link ကို OneOdio A10 OneOdio A70
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » OneOdio A10 နှင့် OneOdio Fusion A70 နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ZTE Blade A3Y သည် Helio A22 နှင့် Android 10 ပါသောဖုန်းအသစ်ဖြစ်သည်